Latabatra fandidiana teknika
Latabatra fiasana an-tsaha
Ny ankamaroan'ny firenena sy ny faritra eto amin'izao tontolo izao dia ao anatin'ny fandriam-pahalemana, saingy mbola misy ny fifandonana kely eo amin'ny firenena vitsivitsy. Ohatra, ny ady Palestine-Israel farany teo. Ho an'ny hopitaly ady any amin'ny faritra miaramila dia ilaina ny fitaovana fitsaboana azo ampiharina sy azo entina. Miaramila matotra ...
Nandritra ny taona maro nisian'ny varotra sy ny famokarana traikefa dia hitanay fa ny mpanjifa sasany dia very hevitra be rehefa mividy jiro miasa. Ho an'ny jiro miasa amin'ny valindrihana dia 2.9 metatra ny haavon'ny fametrahana azy. Saingy any Japon, Thailand, Ekoatera, na sasany ...
Baiko fanamboarana Belated amin'ny jiro miasa